The Complete Guide To Travel any Frantsa By Train | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Frantsa > The Complete Guide To Travel any Frantsa By Train
Frantsa Efa ela no toerana tena ary iray amin'ireo mpizaha tany malaza indrindra toerana any Eoropa. Raha jerena fa io no lehibe indrindra tany amin'ny faritra andrefan'i Eoropa firenena, tsy misy dikany ny mandeha lamasinina. Ny governemanta frantsay vola ao amin'ny andalana haingam-pandeha (Large volamena haingana tsipika TGV) ary ny fiarandalamby haingam-pandeha (Lehibe fiaran-dalamby TGV volamena Speed ​​Train). Betsaka kokoa noho ny 1056 kilaometatra (1700 km) ny vita fanoloran-tena haingam-pandeha koa ny andalana an'arivony kilaometatra ny lehibe sy kely ny tsipika. Efa ho ny firenena iray manontolo dia tsy ho azo amin'ny alalan'ny lalamby frantsay. Frantsa ny fiarandalamby dia mahomby, fifadian-kanina, ary hahazo anao izay te ho any ao amin'ny firenena ary koa ny na avy amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina. Raha toa ianao ka voalohany-ny dia lavitra any Frantsa, ny fomba tsara indrindra hahazoana manodidina mampiasa fiaran-dalamby mandeha tsara diany dia amin'ny alalan'ny drafitra. Na izany aza, Network ny lalamby dia afaka ny ho kely mampisaraka, indrindra fa rehefa tsy miteny na mamaky frantsay. Hanampy anao hahatakatra ny lamasinina rafitra any Frantsa, efa namorona tanteraka mpitarika ny mandeha lamasinina nanerana an'i Frantsa.
Ato amin'ity torolalana, dia ho hitanao avy ny zava-drehetra tokony ho fantatrao mba hamorona ny nokasainy hatao manokana. Koa izahay hanome fanazavana momba ny fiaran-dalamby orinasa isan-karazany izay miasa any Frantsa sy ny karazan-fiaran-dalamby. Dia homenay anao torohevitra sarobidy amin'ny hividianana tapakila ho an'ny ny vidiny ambany indrindra, fikarohana ny lalamby rafitra, ny soa ny lalamby hadilanana, ary mahazo manodidina Frantsa avy any Paris. Tohizo ny famakiana ny Complete Travel Guide To any Frantsa By Train mba hahita ny fomba mandeha ho any Frantsa lamasinina.
Ahoana no To Buy Train Tickets any Frantsa
Aiza no azoko ividianana tapakila ho an'ny fiaran-dalamby nankany Frantsa?
Maro ireo fomba mora sy mety, na vohikala ho an'ny fiaran-dalamby frantsay mividy tapakila. Izy ireo somary mora ampiasaina, fa maro amin'izy ireo niaraka ny quirks sy oddities fa mila milaza.
Afa-tsy ny Train dia orinasa izay digitized sy Nanova tanteraka rail ticketing. Tsidiho ny tranonkala, ampitahao amin'ny fiaran-dalamby saran, mifidy ny fiaran-dalamby tsipika, ary karazana seza tianao. Afaka mandoa amin'ny carte de crédit na bitcoin. Raha ny lamasinina tapakila ny vidiny latsaka, ny sehatra dia handefa anareo hahafantatra sy hanampy anao hanakalo azy ho ambany vidiny.
When miditra ny tranonkala ofisialin'ny Anarana iombonana amin'ny lalamby, dia tena mety hahazo niova ho RailEurope.com, dia ny mpiara-miasa ofisialy Amerika Avaratra Frantsay lalamby. Na izany aza, foana dia tsy hahita ny manjo mora indrindra amin'ny Rail Eoropa. Ary noho izany, tokony ho tsaroanao foana fa ny saran-dàlana amin'ny làlamby mora indrindra dia ao amin'ny Save A Train.
Amin'ny The Train Station
Misy fomba roa mba hividy tapakila frantsay lamasinina amin'ny gara - avy amin'ny tapakila varavarankely sy amin'ny vending milina. Anglisy mpiteny azy ireo dia afaka mividy Na ahoana na ahoana, fa raha ny teny anglisy no tsy tsara, ary tsy afaka miresaka amin'ny olona teo am-baravarankely tapakila tsara, ny vending milina no tsara indrindra Bet. Tsy mora ny fitetezana, ary afaka manova ny fiteny mihitsy aza Fikirana. Mividy tapakila avy amin'ny vending milina mitaky Chip & PIN carte de crédit.
Ahoana no fomba tokony hanangona ny tapakila an-tserasera?
Maro ireo fomba fanangonana ny tapakila:
Haka amin'ny gara. Mba hanangona ny tapakila amin'ny gara, dia afaka mampiasa ny famandrihana vaovao maro, na ny carte de crédit (tsy miova no nampiasaina mba hividy ny tapakila).
Endriny atao ao an-trano tapakila. Rehefa avy mandray ny tapakila elektronika, dia afaka pirinty azy ireo sy hampiseho azy ireo ny lamasinina mpitarika izay manamarina tapakila.
Electronic tapakila. Raha tsy te-pirinty ny tapakila, Afaka maka azy ireo amin'ny telefaonina na ny takelaka. Afaka mampiseho fotsiny ny mpitarika ny tapakila amin'ny alalan'ny finday na ny lamba takelaka.
nanoratra ho tapakila. Misy tolotra manolotra ny safidy ny naniraka anao ny tapakila amin'ny alalan'ny tsy tapaka namany Sary. Na izany aza, izay tena miadana dingana, ary noho izany, tsy Recommended safidy.
Tokony ho lamasinina mividy tapakila mialoha?
Azo mampisaraka ny hahafantatra izay lamasinina tapakila azo vidiana isaky sy izay tokony ho nividy mialoha satria misy maro karazana samy hafa fiaran-dalamby sy ny fiaran-dalamby asa.
Regional / local fiarandalamby. -Paritra sy eo an-toerana mifandray suburban fiarandalamby sy isam-paritra faritra. RER ary Transilien Connect suburban Paris, raha mbola Ter fiarandalamby (Train Regional Expres) dia faritra fiarandalamby izay mampifandray faritra hubs amin'ny tanàna kely. Tsy voatery hividy-paritra sy eo an-toerana lamasinina tapakila mialoha, mividy azy tsara fotsiny alohan'ny lasa.
Intercite fiarandalamby (I C). An Intercites fiaran-dalamby dia mazava fiaran-dalamby izay tsy mandeha eo amin'ny hafainganam-pandeha avo-tsipika, ary mampifandray tanàna ary koa fohy lavitra. You can purchase IC tickets in advance to get a discount.
Fiarandalamby haingam-pandeha (TGV). Fiaran-dalamby TGV no haingana indrindra fiaran-dalamby any Frantsa, ary ny tapakila ho azy ireo dia natao ho an'ny fividianana 90 andro mialoha. Ny vidin-javatra ho azy ireo mbola hitsangana tahaka ny daty lasa manatona, dia boky ireo tany am-boalohany noho ny vidiny ambany indrindra. A nividy tapakila 90 andro mialoha afaka lafo € 30. Fa raha toa ka mba hividy azy ireo, andro vitsivitsy talohan'ny lasa, the ticket price could be as high as €100.
fiarandalamby iraisam-pirenena. Toy izany koa tany am-boalohany lalàna momba famandrihana fiaran-dalamby mihatra amin'ny iraisam-pirenena, satria ireo ihany koa ny fiarandalamby haingam-pandeha.
Nahoana no mahasoa ny lalamby handalo tapakila?
Misy isan-karazany ny fiarandalamby mandalo tapakila azonao ampiasaina ny mandeha lamasinina nanerana an'i Frantsa. Ny sasany amin'izy ireo mamela anao mandeha ao Frantsa sy ireo firenena Eoropeana, ary avy eo dia misy lalamby hadilanana izay fotsiny fa mandeha ao Frantsa. Tsy toy ny saran-dalana tsy tapaka, rail mandalo tapakila avy amin'ny sasany soa:
manovaova. Miaraka amin'ny rail mandalo tapakila, mahazo mandeha fiaran-dalamby tsy manam-petra. Fotsiny handeha ho any amin'ny gara isaky ny tianao, hanafoana ny lalamby Ary tamin'ny birao fiantsonan'ny fiaran-dalamby ary hahazo ny manaraka misy fiaran-dalamby.
fihenam-bidy. Rail mandalo matetika avy amin'ny inclusions ny fihenam-bidy ho an'ny manintona, mahatonga azy ireo safidy tena tsara ho an'ny teti-bola mpandeha. Izy ireo dia afaka ny ho be vola-mpamonjy, izay no tena antony ny olona hividy lalamby hadilanana. Last-minitra saran-dalana dia mety ho lafo vidy raha tsy boky azy ireo mialoha.
tsy hanahirana. Tsy mila miahiahy momba ny fividianana ny tapakila isaky ny te-haka ny fiaran-dalamby, fa tsy maintsy manana manovaova satria dia tsy hanana toerana eo amin'ny fiaran-dalamby rehetra fa tiany.
Iza rail mandalo aho no hividy tapakila?
Rehefa mividy tapakila ny lalamby mandalo, dia afaka misafidy ny Firenena Frantsa Pass ary Multi-Country Pass (Eurail Global Pass).
The Firenena Frantsa Pass no tsara indrindra Bet fotsiny raha toa ianao ka mandeha any Frantsa satria manome misy fetra mandeha amin'ny lalamby pirenena Network (anisan'izany ny intercity, Ter, TGC, etc.). Azonao atao ny misafidy na 1 ny 8 andro mandeha ao anatin'ny iray volana ary koa ny misafidy ny kilasy voalohany sy faharoa. A seza famandrihana no takina, ankoatra ny amin'ny lalamby nitranga ny mandeha amin'ny haingam-pandeha fiarandalamby. Miaraka amin'ity mandalo, ianao koa dia mahazo fihenam-bidy eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka isan-karazany, baka, Cruises, trano fandraisam-bahiny, tranombakoka, ary ny hafa manintona.
The Eurail Global Pass no safidy tsara kokoa raha drafitra ihany koa ny handeha ho any amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina. Izany multi-tany mandalo manam-petra dia manome mandeha ho 31 samy hafa firenena any Eoropa (anisan'izany i Frantsa). Miaraka Eurail hadilanana, tsy misy fetrany ny isan'ny fotoana dia afaka hahazo ny fiaran-dalamby. Mifidiana na 3, 5, na 7 andro mandeha ao anatin'ny iray volana na 10-15 andro mandeha ao anatin'ny roa volana. Tsarovy ny manao famandrihan-toerana alohan'ny lasa.
Ny ankamaroan'ny rail dia taratasy hadilanana-monina, ary dia mila hanoratra ny daty ny lasa eo anoloan'ny diany voalohany tamin'ny isan'andro. Seza famandrihana ho an'ny fiarandalamby haingam-pandeha ianao dia lany eo amin'ny € 10 sy € 20 isan-toerana, iraisam-pirenena raha Travel famandrihana miainga amin'ny € 35 € 89 isan-ny seza (arakaraka ny toerana itodiana).
AN LEHIBE NOTE: Rail Pass soa ihany no zava-dehibe noho ny vola raha mampiofana mandeha ho mihoatra noho ny 14 andro, raha mandeha fa tsy, noho ny hevitra ny teboka saran-dalana toy ny zavatra Save A Train no manolotra fanatitra zava-dehibe kokoa noho ny vola.
Marseilles mankany Lyon lamasinina
Paris to Lyon Train train
Ny fomba fampiasana Train Tickets any Frantsa?
Ao amin'ny faritra sy ny ao an-toerana fiarandalamby, mety mila mandeha amin'ny ara-batana tapakila. Mandehana any amin'ny fankatoavana eo anoloan'ny lasa boaty ho kery na "tombo-kase" ny tapakila. Raha toa ka tsy hanamafy azy eo anoloan'ny lasa, miandry ny mpitarika mba hanafoana izany raha mbola eo amin'ny fiaran-dalamby. Tsy misy seza famandrihana ho an'ny faritra sy ny ao an-toerana fiarandalamby, dia mipetraka fotsiny na aiza na aiza.
Ao amin'ny fiarandalamby haingam-pandeha, misy fotoana manokana eo amin'ny tapakila pirinty, ary ny tapakila manan-kery ihany no ho amin'ilay ao ny fotoana. Tsy misy ilaina ny hanamafy ny tapakila satria manana seza famandrihana. Ataovy azo antoka fa ny tsara hitanao fiara sy ny seza (ny isa voasoratra na vita pirinty amin'ny tapakila).
Around nahazo Frantsa Avy Paris
Raha ny mpizaha tany tonga any Frantsa, ny ankamaroan'izy ireo dia manao an'i Paris ho toeram-piandohan'ny dian-dalamby ao amin'ny firenena. Rehefa nanomboka tamin'ny Paris, dia afaka tonga efa misy toerana ao amin'ny firenena. Ireo no sasany amin'ireo toerana lehibe nanompo avy Paris izay ahitana fitambaran gara.
Gare d'Austerlitz na Train Station Austerlitz – Bordeaux, Limoges, Poitiers, Toulouse, Biarritz, Tours, ary ny faritra andrefan'i Espaina.
Train Station Montparnase na Gare Montparnasse – TGVs rehetra amin'ny faritra andrefan'i Frantsa (Rennes, Nantes, Brest, Brittany)
Gare du Nord – avaratra atsinanan'i Frantsa, Valenciennes, kely, Calais; Brussels, Cologne, ary Amsterdam (Thalys); London (Eurostar).
Gare de Lyon – Atsimon'i Frantsa. Montpellier, Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand, Besançon, Marseille, Nice. Mulhouse tany Atsinanana Frantsa. Katalonia (Girona, Barcelona), Italia, ary Soisa (Geneva, Zurich).
Saint Lazare Railway Station na Gare St. Lazare – Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg.
East Station – Nancy. Reims, Metz, Strasbourg, Luxembourg, ary Alemaina.
Best Travel Tips Fa any Frantsa By Train
Izahay manome anao ny lisitry ny toro-hevitra lehibe izay hahatonga ny fiarandalamby mandeha any Frantsa kokoa ny mety sy mahafinaritra.
Tonga tany am-boalohany ao amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Aza adino ho any amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby, fara fahakeliny, 20 minitra alohan'ny lasa, na talohan'izay mihitsy aza raha toa ianao ka mandeha amin'ny gara lehibe, toy ny Gare du Nord ao Paris. Fa ny mpizaha tany izay tsy miteny frantsay, tsy misy na inona na inona ratsy kokoa noho ny tonga afa-tsy minitra vitsy alohan'ny lasa tsy manana ny hevitra kely ny hoe aiza no handeha. Tonga tany am-boalohany no hanome anareo ampy ny fotoana mba hijerena ny Fiaingana Birao for fitobiana vaovao, hamantatra izay sehatra ny fiaran-dalamby no mandao, and find the right platform.
Tsy handao ny entana nikarakara. Azonao atao ny mandeha amin'ny toeram-pivarotana teo akaiky teo ho an'ny sasany tsakitsaky na rano. Raha manapa-kevitra ny handeha manodidina, aza mahafoy ny kitapo nikarakara na dia iray segondra. Raha tsy izany, ianao hampidi-doza ny manana ny entana nangalarina za-draharaha mpangalatra. Major gara any Frantsa (Anisan'izany i Paris Gare du Nord, Paris Gare de Lyon, ary Paris Austerlitz-peo) efa nahafoy-fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana entana isan-karazany habe. Alohan'ny hidiranao ny faritra locker, manantena hanana ny kitapo X-rayed. indray mandeha onboard, mametraka ny entana ao an-mahita tsara fa tsy eo amin'ny toerana entana vita fanoloran-tena.
Entana sasany sakafo. Mpandeha no avela hitondra ny sakafo sy zava-pisotro eo amin'ny fiarandalamby, izay lehibe lavitra noho ny mitaingina fiaran-dalamby. Misy fiarandalamby manana fisotroana kafe tao an-tsambo, ary ny ankamaroan'izy ireo manana Trolley sariety izay tonga manodidina. Indrisy, ny Trolley tsy tonga foana, ary ny fisotroana kafe azo mikatona. Ny sakafo sy zava-pisotro tao an-tsambo koa lafo kokoa. To afa-bola, entana ny tenanao hitsangatsangana amin'ny toerana tena sakafo eo anoloan'ny diany rehetra. Misy fivarotana isan-karazany tsy hanahirana amin'ny ankamaroan'ny gara izay afaka hividy sakafo sy zava-pisotro.
Download ny rail Planner fampiharana ny finday. Misy isan-karazany ny fiarandalamby pandaharam-potoananao Apps dia afaka mametraka sy ampiasaina mba hahatonga ny fiarandalamby mandeha kokoa ny mety. Ny lahatsoratra dia ahitana rehetra Info sy ny fiaran-dalamby ny fandaharam-potoana ho an'ny Eoropeanina fiarandalamby, ary ny sasany dia tsy mitaky fampiharana ny fifandraisana aterineto. Miaraka amin'ny fampiharana rail pandaharam-potoananao, dia ho fantatrao foana ny fiaran-dalamby na dia tsy maintsy tara (ary mandra-pahoviana) na ara-potoana, ary koa ny sehatra izay dia tonga / Mandehana. In tanàn-dehibe tahaka an'i Paris, tsy misy iray “tena” peo, ary dia mora ny hampifangaro toerana iray ho an'ny iray hafa. Miaraka amin'ny fampiharana tsara, ianao dia ho azonao antoka fa ny marina eny amin'ny fiantsonan'ny.
entana. Raha ny entana, dia afaka mitondra betsaka araka izay afaka mitondra satria tsy misy lanjany mametra. Afaka mitahiry ny kitapo ambony, ao ambadiky ny seza, na ao amin'ny entany ao an-fiara Mitrosa.
-Kilasy voalohany sy ny faharoa-kilasy tapakila. Tsy misy maha samy hafa be ny voalohany sy ny faharoa-kilasy-kilasy fiara. Na izany aza, dia mangina ao amin'ny kilasy voalohany, sy ny fipetrahan'ny kely dia lehibe kokoa. Mpanao faharoa ny kilasy fiara ihany koa mahazo aina tanteraka. It’s worth mentioning that first-class tickets cost about 1.5x more than the second-class fare.
Tsy afaka refund mora tapakila. Perhaps the only downside to cheap tickets is that they cannot be changed or refunded.
Self-service milina. Rehefa mampiasa tena fanompoana tapakila milina, dia afaka misafidy ny safidy teny anglisy, ka tsy misy ilaina ny fanahiana raha tsy miteny frantsay.
Mitondra bisikileta. On an-toerana sy isam-paritra fiarandalamby, dia afaka maka bisikileta miaraka aminao maimaim-poana. TGVs sy Intercity Night (levitra fiarandalamby) amin'ny lalana vitsivitsy mamela anao haka bisikileta ho an'ny kely sarany (matetika momba € 10). Fiaran-dalamby TGV hafa, dia tsy maintsy hametraka ny bisikileta ao amin'ny Zip-up bisikileta kitapo.
Ny fanaovana fifandraisana. Teny an-dalana, Mety mitaky ny diany anao hanova fiaran-dalamby. Ara fiarandalamby izay miavaka dia haingana sy mora, ka tsy misy ilaina ny fanahiana raha tsy manam-potoana eo amin'ny fiaran-dalamby. Ny fiaran-dalamby mandeha fifandraisana mety tafiditra any am-pitan'ny ny lampihazo na ny ampahany hafa amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby.
Hahafantatra ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby anarana. Tanàna lehibe no manana fomba maro gara, izay afaka miteraka fikorontanana. Raha toa tsy afaka tsianjery ny anarany, hahasoratra azy eo amin'ny tapa-taratasy, hamonjy azy amin'ny finday, na mampiasa ny lalamby pandaharam-potoananao fampiharana.
Tsaina ny fiaran-dalamby fitokonana. Frantsa dia fantatra ho fiaran-dalamby fitokonana, ary izy ireo foana hampitandrina ny vahoaka alohan'ny amin'ny iray. Misy fiarandalamby dia mbola mihazakazaka, fitokonana dia zavatra ho Diniho ny raha te-tsy nanahirana lehibe.
Use Chip & PIN carte de crédit. Mba hividianana tapakila amin'ny tapakila iray mandeha ho azy kiosk, dia mila ny Chip & PIN carte de crédit, ka ho azo antoka ny PIN fantatrao fehezan-dalàna, na dia tsy fahazoan-dalana izany, satria ny tena lafo.
Tanàn-dehibe rehetra ao Frantsa dia mifandray amin'ny TGV – haingam-pandeha ny lamasinina tambajotra amin'ny fiaran-dalamby izay mandeha amin'ny hafainganam-pandeha efa ho 200 mph. Amin'ny hafainganam-pandeha ireo, all areas of France are within your reach.
Namorona izany mpitari-dalana izahay “Complete Guide To Travel any Frantsa By Train” mba hanome anao fahatakarana ny fomba mahery ny frantsay lalamby rafitra miasa sy manampy anao raha toa ka mieritreritra ny nandray ny fiaran-dalamby, fa tsy azo antoka izay tokony hatao na aiza mba hanomboka. Na ianao amin'ny backpacking traikefa nahafinaritra, ny raharaham-barotra lavitra, na eo amin'ny fianakaviana iray fialan-tsasatra, efa nahazo anao voasarona, Save Lamasinina no toerana mba hividy tapakila fiaran-dalamby.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “The Complete Guide To Travel any Frantsa By Train” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-france-train/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / en ny / na / en sy ny maro hafa fiteny.
#sncf TGV TrainStation traintickets Train Travel traintravelfrance travelfrance